AHOANA NO HAMPITOMBO NY HAAVO AMIN'NY INTERNET AMIN'NY ALALAN'NY ROUTER WI-FI - NY ROUTER - 2019
Ampitombo ny haavo amin'ny Internet amin'ny alalan'ny router Wi-Fi
Ny mpandidy ao amin'ny Photoshop dia mety manana olana amin'ny fampitomboana na hampihenana ny habeny.
Raha ny marina dia tsotra ny zava-drehetra.
Ny fiovaovan'ny lay dia novaina tamin'ny asa "Scaling"izay ao amin'ny sakafo Fanitsiana - Fivoarana.
Hisy rafitra hiseho eo amin'ilay zavatra hita eo amin'ny sehatr'asa mavitrika, izay manondro fa alefa ilay asa.
Ny fanoroana dia azo atao amin'ny fisintonana marika eo amin'ny frame.
Azonao atao ny manitatra ny lafin-javatra manontolo araka izao manaraka izao: mifidiana seha-doko iray manontolo amin'ny alalan'ny famerenana klavier CTRL + Aary avy eo dia miantso ny asa fanalefahana.
Mba hisakanana ny habetsahana rehefa manalefaka loko iray, dia mila mihazona ny fanalahidy ianao fiovàna, ary noho ny fanalefahana avy any afovoan-tanàna (na ho an'ny foibe) dia ilaina ihany koa ny fanalahidy Alt, fa vao aorian'ny fanombohana ny dingana.
Misy ihany koa ny fomba haingana mba hiantsoana ny sehatra fanalefahana, raha amin'ity tranga ity ihany dia hantsoina izy io "Fiovàna malalaka". Nantsoina tamin'ny alalan'ny fohy CTRL + T ary mitarika ho amin'ny vokatra iray ihany.
Amin'ny fampiasana ireo teknika ireo, dia afaka mampitombo na mampihena ny haben'ilay sary ao Photoshop ianao.
Fampitahana amin'ny aterineto
Ekipa XX ekipan'ny herinandro FIFA 19
Fomba hanamboarana ny hadisoana amin'ny xpcom.dll rehefa manomboka Mozilla Firefox
Famoronana rindrambaiko video
Ny fanodinana sary dia ahitana karazan'asa maro - avy amin'ny fanamafisana ny hazavana sy ny aloky ny fananganana ireo singa tsy hita. Amin'ny fanampian'ny farany, miezaka ny miady hevitra amin'ny natiora isika na manampy azy. Farafaharatsiny, raha tsy ny natiora, avy eo ny mpanakanto mpanao hatsikana, izay tsy nitandrina tsara. Amin'ity lesona ity dia hiresaka momba ny fomba hampiroboroboana ny molotra ao amin'ny Photoshop ianao, manaova sary fotsiny. Read More
Ny fomba rehetra handrafetana karatra memory
Famoahana ny Tonian'ny politika eo an-toerana eo amin'ny Windows 10